Ribeka Chọrọ Ime Ka Obi Dị Jehova Ụtọ | Kụziere Ụmụ Gị Ihe
E nwere otu nwaanyị aha ya bụ Ribeka. Ọ hụrụ Jehova n’anya. Aha di ya bụ Aịzik. Aịzik hụkwara Jehova n’anya. Olee otú Ribeka si ghọọ nwunye Aịzik? Olee otú o si gosi na ya chọrọ ime ihe ga-eme Jehova obi ụtọ? Ngwa, ka anyị gụọ banyere ya.
Ebreham na Sera bụ nne na nna Aịzik. Ha biri na Kenan. Ndị obodo ahụ anaghị efe Jehova. Ma, Ebreham chọrọ ka nwa ya nwoke lụọ onye na-efe Jehova. N’ihi ya, ọ gwara ohu ya ka ọ gaa Heran lụtara Aịzik nwaanyị. Ndị ikwu Ebreham bi n’obodo ahụ. Ọ ga-abụ na ọ bụ Elịiza ka Ebreham zigara Heran.
Ribeka kutere mmiri kamel niile a ṅụrụ
Elịiza na ndị ohu Ebreham ndị ọzọ so gawa Heran. Obodo ahụ dị ezigbo anya. Ha ji kamel iri buru nri na onyinye gawa. Olee otú Elịiza ga-esi ama nwaanyị ọ ga-alụtara Aịzik? Mgbe Elịiza hà rutere Heran, ha kwụsịrị n’akụkụ otu olulu mmiri. Ihe mere ha ji kwụsị ebe ahụ bụ na ha ma na ndị mmadụ ga-abịa ebe ahụ isere mmiri. Elịiza rịọrọ Jehova, sị, ‘Nwa agbọghọ ọ bụla m rịọrọ ka o kunye m mmiri, ya ekunye m, kutekwa mmiri kamel anyị ga-aṅụ, m ga-ama na ọ bụ onye ị họtaara m.’
Ọ dịghị anya, Ribeka abịa isere mmiri n’olulu mmiri ahụ. Baịbụl kwuru na ọ mara ezigbo mma. Elịiza gwara ya ka o kunye ya mmiri ka ọ ṅụọ. O kunyere ya mmiri, setakwara kamel ha niile mmiri. Ị̀ makwa ihe ọ pụtara? Kamel na-aṅụ nnukwu mmiri, ma ya fọdụkwa nke mmiri na-agụ. N’ihi ya, Ribeka gbagara ugboro ugboro n’olulu mmiri ahụ iseta mmiri. Ị̀ hụrụ otú o si na-ekutere kamel ndị ahụ mmiri na foto a?— Obi tọrọ Elịiza ezigbo ụtọ maka na Jehova zara ekpere ya.
Elịiza nyere Ribeka onyinye ndị mara mma. Ribeka gwara Elịiza na ndị ahụ so ya ka ha bịa n’ụlọ ha. Mgbe ha ruru n’ụlọ ha, Elịiza gwara ha ihe mere Ebreham ji sị ya bịa Heran. Ọ gwakwara ha otú Jehova si zaa ekpere ya. Nne na nna Ribeka na ụmụnne ya kwetara ka Ribeka gaa lụọ Aịzik.
Ribeka so Elịiza laa Kenan, gaa bụrụ nwunye Aịzik
Ma, ì chedịrị na Ribeka chọrọ ịlụ Aịzik?— Ribeka ma na ọ bụ Jehova dutere Elịiza. N’ihi ya, mgbe a jụrụ ya ma ọ̀ chọrọ ịga Kenan ka ọ gaa bụrụ nwunye Aịzik, ọ sịrị, ‘Ee, m chọrọ ịga.’ O sooro Elịiza lawa ozugbo. Mgbe ha ruru Kenan, ọ ghọrọ nwunye Aịzik.
Jehova gọziri Ribeka n’ihi na o mere ihe ọ chọrọ. E mechara mụọ Jizọs n’ụwa. Onye mụrụ ya si n’ezinụlọ Aịzik na Ribeka. Ọ bụrụ na ị na-eme ka obi na-atọ Jehova ụtọ otú ahụ Ribeka mere, ọ ga-agọzi gị.
Ònye bụ Ribeka?
Gịnị mere na Ebreham achọghị ka Aịzik lụọ nwaanyị Kenan?
Olee otú Elịiza si mata na ọ bụ Ribeka ka Jehova họpụtaara Aịzik?
Anyị chọọ ịdị ka Ribeka, gịnị ka anyị kwesịrị ịna-eme?